Guatemala: Fanamby ho an’ilay vehivavy voalohany hitana ny andraikitra mpampanoa lalàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Janoary 2011 14:28 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Italiano, Español, English
Vehivavy, Panajachel navoakan i Marlin Harms araka ny fampiasana ny Creative Commons attribution license version 3.o
Ao amin'ny firenena anankiray izay 32% monja amin'ny vehivavy [es] no nahavita fianarana ambaratonga faharoa, izay mbola ambany ny fitovian'ny lahy sy ny vavy, izay 8% monja amin'ny solombavam-bahoaka no vehivavy ary tsy mbola misy vehivavy mitantana orinasa na mitantana varotra ambony, ny fanendrena vehivavy ho amin'ny fitantanam-bahoaka sy ho amin'ny toerana ambony ara-politika dia mampikorontana ny lafiny politika any an-toerana.
Ny fanendrena vao haingana izay ho Talen'ny Sampan-draharaha momba ny Fiarovana, ny Mpanara-maso, ny mpampanoa lalàna ary ny Sekretera Nasionaly momba ny fifindra-monina izay samy vehivavy avokoa, araka ny hazavainan’ y bilaogy Central American Politics :
Nanao dingana lehibe i Guatemala tato anatin'ny herinandro vitsy izay raha ny lafiny fanomezana toerana ambony ao amin'ny fitondrana hotantananan'ny vehivavy no jerena. Tato anatin'ny herinandro vitsy izay, vehivavy no notendrena hitantana ny toerana ambony ho mpampanoa lalàna sy mpanara-maso ary Claudia Paz y Paz notendrena ho mpampanoa lalàna sady ho Minisitry ny mponina hiasa mandritra ny efa-taona sady hisahana ny sampan-draharahan'ny famotorana sy fitoriana eo anivon'ny fitsarana, raha Nora Segura kosa no mpanara-maso (contrôleur général), hiasa mandritra ny 5 taona ary hisahana ihany koa ny fanaraha-maso ny fandaniana ataon'ny fanjakana, manomboka amin'ny teti-bola 2011, noferana ho 6,8 lavitrisa dôlara. Paz y Paz sy Segura no nanampy isa an'i Blanca Stalling izay notendren'ny filoha Colom ho talen'ny Sampandraharahan'ny Fiarovana ireo voampanga, sampandraharaha hanara-maso ny fiarovan-tenan'ireo voapanga, ary Heydi Gordillo, sekretera nasionalin'ny sampandraharaha momba ny fifindra-monina.
Any Guatemala, izay ny vehivavy amin'ny foko rehetra sy ny toerana sôsialy rehetra dia vonoina amin'ny fomba feno habibiana na ratraina, ny fanendrena an'i Claudia Paz y Paz hitana ny toeran'ny mpampanoa lalàna dia nankasitrahan'ny vondrona samihafa, indrindra ny sampana mpiaro ny zon'olombelona –mazava ho azy koa ny Blog Fundación de Sobrevivientes [es].
Ny bilaogy Breaking the silence niarahaba sy nankalaza ity fanendrena vehivavy voalohany hitana ny andraikitry ny mpampanoa lalàna any Guatemala ity tamin'ny faran'ny volana desambra:
Niasa tamim-pahavitrihana ho an'ny zon'olombelona ny Dr. Paz y Paz fa indrindra ho an'ny zon'ny vehivavy, amin'ny maha akademika sy mpitari-tolona ary mpahay lalàna azy. Izy no talen'ny Firenena Mikambana misahana ny kômisiona hampanara-dalàna ny mpifindra monina ary izy koa no fankan-kevitra momba ny asan'ny firenena mikambana any Guatemala. efa talen'ny ICCPG (Sampandraharaha misahana ny fampitahana ireo fianarana siansa momba ny vono olona any Guatemala) koa izy.
Na izany aza, lehibe ny fanamby. Araka ny voalazan'ny bilaogy Asociación por tí mujer [es] (Fikambanam-behivavy), tamin'ny taona 2010 fotsiny, dia vehivavy 680 no nisy namono tamin'ny basy na nampijaliana tany Guatemala, ary fitarainana momba ny fanaovana herisetra amin'ny vehivavy ao an-tokantrano miisa 48 000 no voaray. Any Guatemala, karamaina mora ny mpamono olona satria 150 dôlara amerikana fotsiny ary ny tsy fahazoana sazy no vao maika mampitombo ny herisetra atao amin'ny vehivavy.
Vao tamin'ny faran'ny volana desambra teo, ilay manam-pahaizana momba ny sociologie sady mpikaroka Emilia Quan no nisy namono tamin'ny fomba feno habibiana [es] tany an-tendrombohitr'i Guatemala tany, manakaiky ny sisintany mampisaraka amin'i Meksika. Niasa tao amin'ny Foibe momba ny fandalinana sy fanadihadihana ny sisin-tany andrefan'i Guatemala CEDFOG [es]) izay. Notapenana ny masony, nofatorana ny tanany ary notsetsemana vorodamba ny vavany, araka ny famaritana nataon'ny bilaogy Guat's going on azy. Nisy ny fotoam-bavaka nokarakaraina hangatahana hery hahazoana miady amin'ny herisetra sy ny tsy fahazoana sazy ho an'ny mpamono olona, araka ny nambaran'ny Radio Santa Cruz Blog [es].
Ny zavatra nahazo an'i Emilia Quan no anankiray hahafahan'ny mpampanoa lalàna vao notendrena hanao fanadihadihana ary hanafay ireo mpamono olona. Kanefa tsy izay ihany akory no olana mila vahana, araka ny ambara ao amin'ny bilaogy Gender Across Borders:
Olona nahafinaritra sady tian'ny olona i Emilia Quan ary mendrika azy ny fahatsiarovana natolotra azy. Kanefa fotoana koa izao hahatsiarovana ireo vehivavy aman'arivony izay tsy mba hita teny amin'ny pejin'ny gazety ny anarany. tsy vitan'ny hoe firenena mana tantara feno herisetra satria vehivavy iray isan'andro no maty, ary koa 2% ny herisetra atao amin'ny vehivavy ihany no voavaha. Ampy izay zavatra mahatsiravina izay. Fa koa ny fatin'ireo vehivavy novonoina na nalaina an-keriny ireo dia mampiseho herisetra tanteraka – fanolanana, fampijaliana, fanesorana taova na rantsana amin'ny vatany – mampiseho fa tsinontsinona ny vehivavy. Ny tsy fanaovana fanandihadihana momba ireo herisetra sy vono olona be dia be ireo no manambara fa tsy raharahian'ny fanjakana any Guatemala ny vehivavy sy ny fiainany.
Lehibe ny fanamby tahaka ny mahalehibe ny fanantenan'ny vahoaka any Guatemala izay manantena foana fa hisy ny fiarovana ary hiady hatrany izy ireo ho an'ny famaizana ireo mpandika lalàna ka miandry ny sampan-draharaha misy vehivavy hanatanteraka izany fanamby izany.